ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါနှင့် တညင်းသီး – Healthy Life Journal
မေး. ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါရှိတဲ့သူတွေက တညင်းသီးစားလို့ရပါသလား ဆရာ။
ပါမောက္ခ ဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီးမှ ဖြေကြားပေးပါသည်။)
ဖြေ. တညင်းသီးက ကျောက်ကပ်ကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ အစာပါ။ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါကလည်း နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ ကျောက်ကပ်ထိခိုက်တတ်တဲ့အတွက် ဆီးချိုရောဂါရှိသူတွေက တညင်းသီးကို ဆင်ခြင်သင့်ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ တညင်းသီးမှာ ပါဝင်တဲ့ ဂျင်ကောလစ်အက်စစ်ကြောင့် ကျောက်ကပ်ထိခိုက်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောက်ကပ်မထိသေးဘူး၊ တညင်းသီးကို စားချင်လွန်းလို့ မရှောင်နိုင်ဘူးဆိုရင် ဆီးချိုရောဂါရှိသူတွေက တစ်ခါတလေမှ တစ်လုံး-နှစ်လုံးထက် ပိုမစားသင့်ပါဘူး။